မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 2013 Best Korean Dramas - Review (Part 1)
Posted by mabaydar at 2:42 PM
" ငါတို့နိုင်ငံက မှတ်သားလောက်တဲ့ စကားတွေ မေးရိုးပြုတ်ထွက်သွားလောက်အောင် အံ့သြလောက်တာတွေကို အစိုးရကအစပြောနေတော့.... " ဒီစာကြောင်းကို ၂ခါလောက် ပြန်ဖတ်တယ်။ ကြိုက်တယ်။ ခေတ်ကို ထင်ဟပ်လွန်းလို့။ ဟီးဟီး.. Korea Drama မကြည့်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ။ ကြည့်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်။ ပျင်းလိုက်နဲ့။ ဟိုတခေါက်က မဗေဒါ recommend ပေးတဲ့ Moon Embracing the Sun ကို ipad ကနေကြည့်ဖို့လိုက်ရှာတာ မတွေ့လို့ မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ အခုလဲ မဗေဒါ review ဖတ်ပြီး The winter, the wind blow ကိုကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြန်ပြီ။ :D
ပထမကား ကိုသိတ်မကြိုက်ဘူး ဇာတ်နည်းနည်းအေးလို့ အဲဓိကား မူဗီ ဗားရှင်းတုန်းကလဲ ကြည့်ဘူးတယ်
ဒရာမာကျ ဇာတ်လမ်းသိတ်မရှိပဲ ရှည်အောင်ဆွဲသလိုဖြစ်နေလားလို့
ဒုတိယကားက အရမ်းကြိုက်တယ် ဒီကားထဲ ပါတဲ့သူတွေ အကုန် ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်ကအစ သရုပ်ဆောင်တော်တော်ကောင်းကြတယ်
ဒုတိယမင်းသမီးကို အသစ်ထင်တာ ရန်ကုန်ပြန်တုန်း သူပါတဲ့ ကားလာနေတယ် အပိုင်း၎/၅၀ ကားမျိုး
I hear your voice ရော ကြည့်ပြီးသွားပြီလား? That winter the wind blow is good bcos of the cast and OST. But the story wise, it isabit slow.
အင်း... အဲဒါကြောင့် That winter the wind blows ကို 4/5 ပဲ rating ပေးခဲ့တာလေ... I hear ur voice is one of my favorite drama of year 2013... I rate 5/5... :) .. thanks for reading and commenting.
5/30/2014 5:40 PM
နှစ်ကားစလုံး မကြည့်ရသေးဘူး။ ကြည့်ဖို့စာရင်းထဲမှာတော့ ထည့်ထားတယ်။
5/30/2014 5:46 PM
နှစ်ကားစလုံး မကြည့်ရသေးဘူး။ ကြည့်ဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ငိုရတဲ့ကားတွေတော့ သိပ်မကြည့်ချင်ဘူး။
ငိုရတဲ့ ကား မကြည့်ချင်ရင် That winter the wind blows မကြည့်နဲ့... သူက ဇာတ်အေး အဆွေးကားဖြစ်တဲ့အပြင် မင်းသား မင်းသမီး ၂ယောက်လုံးကလဲ အဆွေးဆို ပိုင်မှပိုင်ဆိုတော့... Jo In Sung ဆို တရွှဲရွှဲ ငိုနေတာ...
I hear your voice ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲအလျောက်တော့ ငိုခန်းတွေပါတာပေါ့နော်.... ဟာသကားမှ မဟုတ်တာဆိုတော့... ဒါပေမဲ့ I recommend it for you to watch...
I hear your voice ထဲက မင်းသမီးက 50th Baeksang Art Awards မှာလဲ အကောင်းဆုံး မင်းသမီးဆု ရတော့ Jun Ji Hyun
ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သိပ်မကျေနပ်ကျဘူးထင်တယ် http://couch-kimchi.com/2014/05/27/50th-baeksang-art-awards-tv-drama-winners/ ပထမကားကတော့ မကြည့်ရသေးဘူး အဆွေးကားဆိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး....သူတို့ နိုင်ငံက ဆုပေးတာကလဲ တော်တော်များတာပဲ ဘယ်လို စနစ်တွေ နဲ့ ဆုပေးတာလဲ ကြုံရင် အဲ့ကြောင်းလေးလဲ ရေးပါအုံး..
Lee Bo Young က Best actress ဆုရပေမဲ့ Jun Ji Hyun က Daesang (Grand Prize) ကိုရသွားတာပဲလေ... သူတို့ဆီက ဆုပေးပွဲတွေက နားလည်သလောက်တော့ သူတို့ Drama air တဲ့ TV Station ကလဲ တစ်နှစ်တစ်ခု သူတို့ ပြသခဲ့တဲ့ ကားတွေထဲကနေ ဆုချတာရှိတယ်.... TV station တွေက များလွန်းတော့ ဆုပေးပွဲတွေက များကြီးလိုဖြစ်နေတာ...
ဒါပေမဲ့ Korean Drama Award တို့ 50th Baeksang Art Awards တို့ကျတော့ အပြင်က ပေးတာထင်တာပဲ .. သေချာတော့ မသိဘူး... အပြင်ကပေးတာဆိုရင် Master's Sun တို့ဘာတို့ကျတော့ ဘာလို့မပါလဲတော့ မသိဘူး...
Best Actress ဆုထက်ဆာရင် Daesung (Grand Prize) က ပိုသာတယ်ထင်တာပဲ... DaeSung က သရုပ်ဆောင် ယောကျာင်္း မိန်းမ မခွဲပဲ ပေးတာထင်တယ်... အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ဆုလိုမျိုးထင်တာပဲ... မဗေဒါလဲ သူတို့ဆီက ဆုပေးတာတွေ သိပ်နားမလည်ဘူး... သိသလောက်ပြောပြတာ...
လောလောဆယ် Jonk Suk ခလေးဇီးဖြစ်နေတယ် အဲ့ကားကြည့်တုန်းက စစချင်း သူလေးကိုရုပ်ဆိုးတယ်တောင်ထင်မိတာ ၃ပိုင်းလောက်ရောက်တော့ ရုပ်ဆိုးလေးတွေဘာတွေဖြစ်လာပီ ခုတော့မရတော့ဘူးကွယ် ကလေးလေး ပူကျူကျူးလေး ဘေဘီလေးဖြစ်သွားပီ အဲ့တုန်းက မင်းသားငို ကိုယ့်မှာလဲငိုလိုက်ရတာ တခုထူးတာက မင်းသားနဲ့တွဲလို့မင်းသမီးကို မနာလိုမဖြစ်ဘူး သူ့လဲကြိုက်တယ် အဲတာထူးတယ်
5/31/2014 2:22 AM
တော်ရုံ မင်းသမီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင် မင်းသားနဲ့ တွဲလို့ မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ နည်းနည်းရှားတယ်... Park Shin Hye ကိုတော့ သရုပ်ဆောင် မဆိုးပေမဲ့ နည်းနည်း မနာလိုဖြစ်တယ်... အဲဒါက ခွငြ်း ချက်.... (ကိုရီးယားမှာ မင်းသား ပူကျူးကျူးလေးတွေ အလန်းလေးတွေနဲ့ချည်းပဲ တွဲနေရလို့)... ဟီး.. I hear your voice က မင်းသမီးက သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်... ဆုရတာလဲ ရထိုက်ပါတယ်... မင်းသားကိုတော့ Secret Garden မှာကတည်းက အဲ့ကောင်လေးကို စိတ်ဝင်စားတာ... Secret Garden မှာ Gay လိုလိုနဲ့ Oscar ကို ကြိုက်ရတဲ့အခန်းကတည်းက သူ့မျက်လုံးက တကယ် Oscar ကို ကြိုက်တဲ့ပုံပေါက်တယ်... သူနာမည်ရလာတာ တော်တော်တော့ မြန်တယ်... ဒုတိယမင်းသားတောင် မဟုတ်ဘူး နောက်လိုက် ကင်မရာ အစမ်းသဘောကနေ ပထမမင်းသား တန်းဖြစ်တယ်...
တူပြန်ပြီ Park Shin Hye ကို heartstring မှာကြီုက်လားဟင် ကိုယ်ကနဂိုကတည်းက yonghwa ခပ်ကြိုက်ကြိုက်ဆိုတော့ အဲ့မင်းသမီးကိုစပြီးအညင်ကတ်လာဘီ ပီးတော့သူ့နှာခေါင်းက တညိုးဘဲ ဆွဲဆောင်မှုတော့ရှိပါတယ် ကိုယ်တော့မကြိုက်
5/31/2014 3:34 PM
I hear your voice မကြည့်ရသေးဘူး၊မင်းသမီးတွေမသိလို့ သူတို့ ကားတွေမကြည့်ဖူးဘူး That winter, the wind blows ကတလျှောက်လုံးကောင်းသလောက် ဇတ်သိမ်းကိုဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မင်းသားမို့ တန်ပါတယ် ဟီး Oh Soo Oppa!!
That winter, the wind blows ဇာတ်သိမ်းက ဒီလိုလို့ထင်ပါတယ်။ Kim Bum က မင်းသားကို သတ်မှသူ့ချစ်သူကောင်မလေးအပါအဝင် သူ့တစ်မိသားစုလုံးမသေမှာပါ။ Boss Kim ကအရမ်းယုတ်မာတာကိုသိတော့ မင်းသားကိုမှချက်ချင်းမသတ်ရင် သူ့မိသားစုလည်းဆုံး၊ မင်းသားကိုလည်း မသေမချင်းလိုက်သတ်မှာကိုသိတော့ သိပ်စဉ်းစားချိန်မရှိတော့ပဲ သတ်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့။ Boss Kim နဲ့ Kim Bum တို့အတွဲကလည်း မင်းသားတကယ်သေသွားတယ်ဆိုပြီး ယုံသွားကြတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ၆လအကြာမှာ မင်းသားက ပြန်ကောင်းသွားပြီး မင်းသမီးနဲ့ပြန်နီးစပ်အောင်လုပ်နေပါပြီ။ မင်းသမီးက မင်းသားသေတယ်လို့ပဲထင်ထားတာနေမှာ။ မင်းသမီးက မျက်လုံးခွဲစိပ်ပြီး အားလုံးအကောင်းပကတိမမြင်ရပေမယ့် ဆရာဝန်တွေ မှန်းထားတာထက်ပိုမြင်ရတယ်။ ဆိုတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာ ဝါးတားတားလေးပေါ့။ သူ့ဘက်ကနေ မြင်ရသလိုလေး မှုန်မှုန်လေးရိုက်ထားတာနေမှာ။ Happy Ending လေးပါ။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ Jo In Sung ကတော့အသည်းစွဲပဲ။ :D
7/05/2014 10:06 PM
အော်... ခုလို ဖြည့်တွေးစဉ်းစားပြီး သေသေချာချာ ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ... ကိုယ်တိုင်လဲ အဲလိုယူဆထားပါတယ်... Happy ending ဖြစ်ချင်လို့.. ပြသွားတာက မြန်ဆန်လွန်းတော့ စိတ်ထဲ တစ်ခုခုလိုနေသလိုဖြစ်မိတာပါ.... Jo In Sung ကိုလဲ အသည်းစွဲပါ... ခုသူ နောက်တစ်ကားထွက်တော့မယ်နော်.... Master's Sun ထဲက မင်းသမီးနဲ့.... စောင့်နေတယ်.... သူ့ကားတွေ အကုန်ကြည့်တယ်...
7/06/2014 12:56 PM
ဟုတ်ပါ့။ မင်းသမီးက သိပ်မလှတော့ စိတ်သိပ်မပါချင်ဘူးရယ်။ Jo In Sung လေးကိုကြည့်ရမှာမို့သာ။ ဟီဟီ
review တွေဆက်ရေးပါဦး။ ဒီကားတောင် အစ်မရေးထားတာ ဖတ်ပြီးမှ ကြည့်ဖြစ်တာ။ ကျေးဇူး။
7/06/2014 4:15 PM